Tantsaha avokoa ny ankamaroan`ny mponina amin`iny faritra iny ary tena antom-pivelomany sy fidiram-bola ho azy ireo ny fambolena. 1 500 ny karatra nozaraina, voakasika mivantana ny fokontany Ivelo. Nitarika ny fotoana omaly ny ben`ny tanàna ao Ambatomirahavavy, Randriamampionona Tolojanahary Michel. Ny fananana kara-tany dia harena mipetraka ary laharam-pahamehana satria be loatra ny hosoka sy hala-tany miantraika any amin`ny tompony. Olana manokana ny mianjady amin`ny manam-bola amin`ny didy tsy ara-drariny avoakan`ny fitsarana sady misy ihany koa ny lalàna tokony hohavaozina momba ny fananan-tany eto amintsika izay efa antitra loatra. Hifarana ny zoma izao ny hetsika amin`iny faritra iny. Mahakasika ny asa fampandrosoana amin`ny kaominina dia hotokanana ato ho ato ny Lisea sy tranompokonolona ao Ambatomirahavavy ary tsy ho ela koa dia hisokatra ny oniversite ao amin`ny fokontany Ambohidranomanga, hoy hatrany ny ben`ny tanàna, Randriamampionona Tolojanahary Michel.